गजल | BARDIYA ONLINE | | Page 5
रक्षा श्रेष्ठ, कैलाली त्यताबाट नजाउ धराप हुन सक्छ। लगाएर बसेको नकाब हुन सक्छ। अलि अलि गर्दै जोगाएर राख्ने गर्छु,यो बुवाबाट परेको प्रभाव हुन सक्छ। मेरो मौनतालाई कमजोरी नठान्नु,तिम्रा हरेक सवालको जवाफ हुन सक्छ। सचेत भै हिडेस छोरी आमा भन्नुहुन्छ,कतिबेला कस्को नियत खराब हुन सक्छ। तिम्रो अतितलाइ यहि साेचेर काेट्याईन,सम्झेभने तिम्लाई तनाब हुन सक्छ। News [पूरा पढ्नुहोस्]
गजल – दिपक आचार्य ” जलन”
दिपक जलन उडने मनलाइ बाधेर बन्धक बनाउनु छ !आफुलाई अरु भन्दा फरक बनाउनु छ ! पसिना बेचियो प्रबासमा दुनियाँ देखियो,अब गाउँमा पुगेर सडक बनाउनु छ ! आउँछ भत्काउछ आस्था निर्दयी नियतले, हिम्मत नहारेर पटक पटक बनाउनु छ ! जिन्दगीमा खाएका ठक्कर र चोटहरुलाई,सिकिएको यौटा पाठ र सबक बनाउनु छ !मानबता बिर्सिएका हरेक यी मान्छेहरुको, भोलि समयले जिन्दगी नरक बनाउनु छ ! गोरो छाला र मिठो कुरा [पूरा पढ्नुहोस्]
गजल – maanis
रहेन यो आखा पनि ओभानो भएन । जब विश्वास गरेको मान्छे आफ्नो भएन । मनसंगै भत्केको घर पुरानो भैसक्यो घर संगै भत्केको घर पुरानो भएन । बराबर छ यो छातीमा समय र तिम्रो प्रहार कसरी भन्नु तिमीलाई आज अचानो भएन । खुसि हुदैछौ अर्काको घरको आगो देखेर किन! तिमीलाई आफ्नो घर न्यानो भएन । पढ्नु पर्छ तिमीले पनि पढ एकचोटी अरे यार देश पढेर कोहि सानो भएन । News [पूरा पढ्नुहोस्]